Dowladda Shiinaha Oo Turkistaanta bari u bedeshey xabsi dusha sare ka furan! – Shabakadda Amiirnuur
Dowladda Shiinaha Oo Turkistaanta bari u bedeshey xabsi dusha sare ka furan!
August 12, 2018 8:19 am by admin Views: 55
Muslimiinta Turkistaanta bari waxay kamid yihiin muslimiinta ugu badan ee dunidan ku nool, lana kulmaya dhibaatooyin aan la suureysan Karin, kuwaas oo uga imaanay shuuciyiinta Jamhuuriyadda Shiinaha.
Dhulka Turkistaanta bari waa dhul weyn, oo masaaxo ahaan lagu qiyaaso 1.660 kilmooter labo jibaaran, waxaana koonfura ka xira gobol lagu magacaabo At-tibti, halka barigana uu ka xigo dalka Mangoliya, wuqooyigana waxaa ka saaran Ruushka, galbeedkana wuxuu deris kala yahay Jamhuuriyaadka islaamiga ee ku jira gumeysiga shiinaha iyo wadamo muslimiin ah sida Kazakhistaan, Dhakajistaan, Pakistaan, Afqaanistaan iyo gobolka Kashmiir oo isna ku jira gacanta dowladdaa Hindiya.
Turkistaanta bari, waxaa si toos ah uu Shiinuhu ula wareegay sanadkii 1949-kii miilaadiyada, waxaana markaas kadib loo bixiyay magac ah Shangiyang, dadka ku noolna waxaa lagu qiyaasa 21 milyan oo ubadan muslimiin asal ahaan loogu yeero Muslimiinta Ayqoor.
Dowladda Shiinaha ayaa si ay ugu suuragasho iney dhalan rogto muslimiiinta ku nool Turkistaanta bari, waxay ku harqisay malaayiin ruux oo shuuciyiin ah, kuwaas oo lagu deegaameyay magaalooyinka Turkistaanta bari.
Qarnigii labaataanaad ee miilaadiyada waxay tiro ahaan ahaayeen gaalada ku nool Turkistaan 10% guud ahaan dadka ku nool halkaas, balse hadda waxaa la sheegaya in tiro ahaan ay gaareen 40% tirada guud eek u nool Turkistaanta bari.
Muslimiinta Turkistaanta bari waxay marar badan isku dayeen iney sameeyaan kacdoono jihadi ah oo ay ku xureynayaan dhulkooda, balse illaa iyo hadda kuma guuleysan arintaas, waxaana dowladda Shiina ay kula kaceysaa gabood fallo kala duwan oo si gaar ah loogu ugaarsanayo muslimiinta Aygooriyiinta.
Waxaa mamnuuc ka ah muslimiinta in caruurtooda ay baraan diinta islaamka, waxaa sidoo kale loo diidaa iney soomaan, masaajidana lama ogola in salaadaha jamaacada lagu oogo, waxaana gabadhaha muslimaadka ah mamnuuc ka ah iney qaataan xijaabka sharciga ah, guri kasta oo ay leeyihiin muslimiintana waxaa ku dhex nool xubin kamid ah laamaha amaanka dowladda, kaas oo howshiisa tahay in wax weliba oo guriga ka cusub uu gaarsiiyo dowladda Shiinahah.
Taqriir cusub oo maalmo kahor ayaa looga marqaati kacay waxyar oo kamid ah dhibaatada ay la noolyihiin muslimiinta Turkistaanta bari.
Warbixin ay soo saartay ururka qaramada midoobay oo dowladda Shiinaha ay qeybta ka tahay ayaa lagu sheegay in labo milyan oo ruux oo kamid ah muslimiinta Ayqooriyiinta ku xiranyihiin xabsiya ku yaala Turkistaanta bari.
Warbixinta waxaa lagu sheegay in gobolkaas uu isku bedely xabsi dusha sare ka furan, islamarkaana dowladda Shiinaha iyadoo ku mar marsiyooneysa la dagaalanka xagjirinimada ay ku kaceyso gabood fallo halis ah.
Malaayiinta ruux ee muslimiinta ah ayaa ku xiran kaamam waaweyn oo ay dhisaan maamulka Shiinaha, waxaana dowladda Shinaha sheegeysaa in xerooyinkaas yihiin goobo ay ku sheegtay in lagu dhaqan celinayo muslimiinta.
Dad kasoo cararay xabsiyadaas, oo la hadlay warbaahinta dibadda waxay sheegayaan in dowladda Shiinaha kaamirooyin dadka ilaaliya ay ku xirtay tuulooyinka fog fog, islamarkaana la qabanayo ciddii laga shakiyo iney iltizaamto diinta islaamka.